XOG: Gudoomiye Yariisow oo Diyaarshay Gudoonada Cusub ee Degmooyinka Gobolka Banaadir Iyo Shaqsiyadka Ugu Cad Cad?
Monday February 12, 2018 - 14:28:59 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Ilo Muhiim ah oo ka ag dhow xarunta dowlada hoose ee xamar ayaa sheegeya in Guddoomiyaha cusub ee Gobalka Banaadir uu xilalka ka qaadi rabo Guddoomiyeyaal degmo.
Eng Yariisow ayaa wararka aan heleyno ay sheegayaan in isaga iyo Madaxda dalka ay ku heshiiyeen in xilalka laga qaado Guddoomiyeyaal degmo oo si weyn u taageersanaa Thaabit Cabdi kuwaas oo la ogaaday in ilaa iyo hada uu xiriir fiican kala dhaxeeyo.
Xarunta Maamulka Gobalka ayaa mashquul badan laga dareemayaa iyadoo shaqsiyaad dhalinyaro u badan ay u kala Xusul duubayaan xilalkaasi, waxaa xilalka ugu badan la saadaalinayaa inay heli doonaan dhalinyaradii sida xoogga leh kaga shaqeyneysay Ololihii doorashada ee Madaxweyne Farmaajo.
Hadaba ilo xog agaal ah ayaa sheegaya in shaqsiyaadka la hadal haaya uu ka mid yahay Nuur Ismaaciil Sheekh oo ay saaxiibo dhoow yahiin Xildhibaanada ugu badan Baarlamaanka Fedaraalka Somalia sidoo kale door ,muhiima ka soo qaatay kaamneynkiin Farmaajo kana mid ah Wariyaasha Magaalada Muqdisho yahey shaqsiga ugu dhow in loo soo magacaabo Gudoomiyaha degmada Boondhoore ee Gobalka Banaadir.
Qaar ka mid ah Guddoomiyeyaasha cusub ayaa la sheegay in durba la sii diyaariyay, waxaana la filayaa in maalama fooda nagu soo haaya lagu dhawaaqi doono xilalka guddoomiyeyaasha Gobalka Banaadir.
Nuur Ismaaciil sheekh Iyo Madaxweyne Farmaajo